Halkaan ka ogow ciyaaryahanno isu bedelay siyaasiyiin | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Halkaan ka ogow ciyaaryahanno isu bedelay siyaasiyiin
Halkaan ka ogow ciyaaryahanno isu bedelay siyaasiyiin
Posted by: Ahmed Haadi February 22, 2019
Himilo FM – Xirafadda ciyaaraha waa mid kamid ah kuwa hadda lagu tilmaami karo in ay yihiin meesha ugu sahlan ee hanti lagu sameyn karo, haddaba halkaan Waxaan idinkugu soo bidhaamineynaa tiro ciyaaryahanno ah oo isu bedelay siyaasiyiin kaddib markii ay ciyaaraha ka deegaan doorsadeen.
Khan, oo 66 jir ah waa mid kamid ah shaqsiyaadka ciyaaraha meel sare ka tiigsaday xiddigaan ku caan baxay dheesha cricket-ka ayaa guulo badan u soo hoyey qarankiisa Pakistan.
Hadda waa ra’iisul wasaaraha dalka Pakistaan waxa uu xilkaan qabtay 27 June 2018.
George Weah ayaa u soo ciyaaray kooxo ay kamid yihiin Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea iyo Manchester City. Arsene Wenger ayaa markii ugu horreysay keenay Europe, isagoo xilligaasi Monaco maamule u ahaa sannadkii 1988.
Xiddigan ayaa ku hantay abaalmarinta ‘African Player of the Year’, waxa uu ku guuleystay horyaalka Serie A iyo Ligue One, sidoo kale wuxuu helay abaalmarinta Ballon d’Or iyo xiddigga sannadka adduunka – isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Afrika ah ee ku guuleysta abaalmarintaasi.
Wuxuu siyaasadda u soo guuray markii uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta 2003, waxaana sannadkii 2017 loo doortay madaxweynaha Liberia isaga oo helay 60% codadka doorashada.
‘Pac-Man’ waxa uu ahaa guuleyste ku caan baxay xirfadda feerka waxa uu ku guuleystay 11 horyaal oo caalami ah.
Halyeyga qaran ee reer Filibiin , waxa uu ciyaaray kubadda kolayga, muusikada iyo dhaqanka -laakiin hadda waxa uu isu arkaa inuu yahay Senator.
Bishii Juun 2016, Pacquiao waxaa loo doortay Senator waxaana uu xilka heynayaa muddo lix sanno ah ilaa 2022.
Romario waxaa loo tixgelinayaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waa weyn kubadda cagta.
Wuxuu ku guuleystay koobkii aduunka ee Brazil 1994-kii waxaana loo magacaabay ciyaaryahanka tartanka iyo xiddiga sannadka adduunka.
Wuxuu dhaliyey 1,000 gool 20 sanno oo uu xirfadiisa ciyaareed ku qaatay, wuxuu koobab kula guuleystay PSV Eindhoven wuxuuna ka hoos ciyaaray halyeyga Johan Cruyff xilligii Barcelona.
Romario oo hadda ah 53 jir, waa siyaasi ah dalkiisa hooyo ee Brazil kaasi oo bishii March sannadkii tegay ku dhawaaqay in u sharaxan yahay guddoomiyaha Rio ee doorashada guud ee Brazil.
Marka xiriirka caalamiga ee Judo uu adiga kuu magacaabo gabadhii ugu wanaagsaneyd dhinaca dumarka abid taariikhda waxaad ogaaneysaa in aad leedahay xirfad aad u fiican.
Tani waxay ku guuleystay 7 koob adduun iyo shan bililad oo Olympic ah oo ay ka mid yihiin laba dahab ah.
Waxay ka fariistay 2010-kii markii laga adkaaday keliya shan jeer intii lagu guda jiray xirfadeeda ciyaareed 20-sanno.
Sannadkii 2010, waxaa loo doortay Golaha Guurtida, aqalka sare ee Baarlamaanka Japan.
Previous: Maqal:- Barnaamijka Aqoon-kaal
Next: Wax ka ogow sababta loo iibinayo gobal ku yaala Mareykanka?